ny mpitantana ny 16-02-26
Chengdu dia haorina amin'ny korontam-asidra mpitarika vatoaratra ho an'ny bisikileta fanodinana herinaratra rafitra
ny mpitantana ny 14-12-18
"Economic Daily Information" iraky ny avy any Chengdu Environmental Protection City Bureau, mba hanatsarana ny fanodinana Network, hanatsarana ny fanodinana fitaovana sy toerana isan-karazany, mba fandotoana dia mihena ho faran'izay kely, no ho Chengdu ny fametrahana ny fako firaka-asidra batteri .. .
Zhengzhou fanadihadiana lalina ny be taona tsy ara-dalàna scooter
Hatramin'ny 15 Desambra, Zhengzhou polisy tamin'ny fanadihadiana ny fanitsakitsahana ny be taona scooter teny an-dalana voalohany amin'ny fanadihadiana sy hametraka ny fampiatoana vonjimaika ny fiara fampitandremana, na tsara, ny mpamily dia teny indray any am-ponja sazy. Nony maraina ny andro, ao amin'ny Wa ...
Road Fitsipika for mivezivezy Scooters
Mba hitazonana mavitrika sy mahaleo tena fiainana, ny sasany sembana sy ny zokiolona ny olona miantehitra amin'ny olom-pirenena mba môtô mivezivezy manodidina. Misy lalàna maro manerana ny firenena isan-karazany momba nihetsiketsika les juridictions môtô. Zava-dehibe ny hahatsiaro ny faritra lalàna sy fitsipika Namerina ...
Inona no maha samy hafa ny Electric seza misy kodiarana sy ny mivezivezy Scooter?
Noho ny olana fototarazo, ratra na ny fahanterana, ny olona efa voafetra indraindray mivezivezy sy miantehitra naterak'ireo kodiarantsika fitaovana mba manodidina. Ireo olona tsy maintsy misafidy eo amin'ny seza misy kodiarana amin'ny herinaratra sy ny mivezivezy scooter. Samy fitaovana ireo dia hahazo ny olona iray izay mila ho any amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, fa ny ...
Iza no manan-danja indrindra mpanamboatra fiara BMW nentim-paharazana herinaratra fiara hivoaka eo an-tampony
Tato anatin'ireo taona faramparany, dia efa nisy haino aman-jery no milaza fa ny tsena ao amin'ny fivarotana maro herinaratra fiara, dia na inona na inona fotsiny mba hihaona California ny aotra-entona politika (ao amin'ny taona 1990, ny politika mitaky ny tsirairay aotra-émission fiara ho vokatra an'arivony mpanamboatra mpivarotra CA ...
10 Fomba anaty Soa azo avy amin'ny Electric Bike
Io lisitra dia tsy ho nivoaka eo amin'ny pejy, satria be dia be ny anatiny ao amin'ity tantara ity dia zava-miafina. Isika izay mitaingina bisikileta haingana herinaratra manana izany tsara, ary tsy voatery ho ny olona rehetra te hahafantatra ny fomba tsara no nahazo azy io. Isika no mahita fa thrills ny handeha downhill na dia nitaingina ny fisaka ...